Maamulidda saaxiibo Papa ku'saabsan iyo Facebook
Papa ku'saabsan taxanaha
Papa ku'saabsan taxanaha Guide
Papa ku'saabsan taxanaha Download
Waa maxay Papa ku'saabsan taxanaha?
Notifications dadka qaar runtii dhibi kartaa…Doqonno yahow!
Qof walba ma Weirdly ku filan wuxuu jecel yahay ciyaaraha (Waxaan ogahay xaq?) Dhab ahaantii, waxaa jira kuwa ka heli darana Garaad marka wargalinta Kaamka on page facebook ama ay * sintay * naxdin naxdin dhamaado ilaa ay newsfeed! News wanaagsan waa ay jiraan siyaabo qaar ka mid weyn in ay ku quudiyaan aad u baahan tahay nolol iyo gargaarka asagoo heer iyada oo aan sii daraan saaxiibo jilicsan kuwa!
Find xulafadooda aad! Iska tuur ah yeedhidda xaaladda Facebook oo dhan saaxiibada ciyaari Papa ku'saabsan amro inaad qaylisaan soo baxay iyo inuu kula socodsiiyo, Waxaan ogahay app waxay u egtahay inuu sameeyo ilaa liisaska dadka ku ciyaaraan (iyo cidda u maleeyo ciyaaraan waa in) laakiin Laaani kuwaas oo dhab ahaantii waa la isku hallaysay, gaar ahaan haddii qof ma aha bixio aad u tech, waxay idman laga yaabaa in ciyaarta kac ahayn in ay isku dayaan oo ku ogaado waxa ay tahay. Waxaad Soo Gabagabeyn Doonaa doodda mar oo dhan la status a, waxaad ka heli doontaa soo baxay oo u ciyaara iyo u baahan yahay nolosha xuma sidii aad, kuwaas oo turxaan bixin iyo waa diyaar u caawin (jiriin ah sida caadiga ah ku wooda la!) iyo kuwa runtii waxba kama gelin, sida, ama ma taagnaan karo codsiyada ciyaarta…afjarayo waxay leeyihiin hab lagu daynin dadka ogahay, Guud ahaan qaylo ah!
Marka aad ku garanayaa kii aad 'run’ saaxiibada yihiin bilaabi samaynaayo liiska smart, this abuuro goobaha gaarka ah iyo dar dadka gujinaya Saaxiibow’ this idin siin doonaa ikhtiyaarka in ay tirtirto ama 'Edit Friends liiska', galaan this iyagoo aad ku dartid liiska smart! ka dibna ay arrinta ah si fudud sidan doorto marka dhajinta to Facebook (dadweynaha, saaxiibada, isbarteen ama aanu arintii!)
Waxaad ku dari kartaa walaalahooda random taageerayaasha Papa ku'saabsan si ammaan ah by xadidayo helitaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed, bixinaya si joogto ah u hubiso goobaha gaarka kuu ah si kasta!
Haddii aad dhibaato ku qaba dhajiyay app adiga ku matalaya mar walba oo aad loo gaaro wax
Filed Under: Papa ku'saabsan taxanaha
Cinwaanka email Your will not be published. Required *
Papa ku'saabsan – Heerarka 23 – 30
Talooyin Papa ku'saabsan for heerarka Way adag tahay
Papa ku'saabsan taxanaha – Heerarka 16- 22
Heerka pear Papa 111
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa cookies si loo hagaajiyo khibradaada. Waxaan u qaadaneynaa inaad kuqanacsan tahay tan, laakiin waad ka bixi kartaa hadaad rabto.Aqbal Akhri wax dheeraad ah
Kukiyada loo baahan yahay ayaa gabi ahaanba lagama maarmaan u ah websaydhka inuu si sax ah u shaqeeyo. Qeybtaan waxaa ka mid ah kaliya cookies kaas oo hubiya waxqabadka aasaasiga ah iyo sifooyinka amniga ee bogga. Kukiyadaas ma keydiyaan wax macluumaad shakhsi ah.
Kukiyada kasta oo laga yaabo inaanay si gaar ah daruuri u ahayn in websaydhku shaqeeyo oo si khaas ah loogu isticmaalo in lagu soo ururiyo xogta shaqsiyeed ee isticmaala falanqaynta, xayeysiis, waxyaabaha kale ee gundhigga loo yaqaan waxaa loo yaqaan 'cookies' aan loo baahnayn. Waa qasab in la iibsado rukhsad isticmaale kahor intaadan ku shaqeynin cookies-ka boggaaga.